WINE 6.16 inovandudza kuenderana nemusoro weDPI madingindira | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.16 inovandudza kuenderana nemusoro weDPI madingindira uye inounza inopfuura mazana mana shanduko
pablinux | | Linux software, Windows
Kune vanhu, senge sevha, vanofarira kutevedzera zvakatemwa marongero, asi kune vamwewo, senge mumwe munhu waunoziva, asingakwanise kuverengerwa nekuti iwe unoziva kuti vanonoka kusvika hafu kana awa chero musangano. WainiHQ yakafanana neni, kana kunyanyisa, sezvo ichigara ichiburitsa software yayo imwe neimwe Chishanu panguva imwe chete. Izvo zvavakasunungura maminetsi mashoma apfuura ndizvo WAINI 6.16, inova nyowani Stage vhezheni nenhau dzichangoburwa, uye zvadaro mazuva gumi nemashanu mushure meiyo yapfuura v6.15.
Huru WINE inogadziridza inosunungurwa kanenge kamwe pagore. Zvichakadaro, chirongwa ichi chinoburitsa zvigadziriso nekuvandudza kwakawanda, asi pane shanduko dzakawanda zvekuti dzinounza kuti kudzikama kunogona kudzikira. Vhiki rino vakaunza 36 bug fixes, ne shanduko makumi matatu nenomwe. Semazuva ese, izvo zvinoratidzwa neWineHQ inongova iyo tip yeiyo iceberg, kana kwete kunyange izvo, sezvo dzimwe nguva zvichidarika kupfuura 1% yebasa rese rakaitwa.
WINE 6.16 Staging dzakakwirira
Pakutanga kuburitswa kweHID-based joystick backend.
Yakagadziridzwa kuenderana neakakwira DPI madingindira.
Yakawanda yekugadzirira basa yeGDI syscall interface.
Zvirinani CodeView rutsigiro muWineDump.
WINE 6.16, iyo inofanirwa kuyeukwa kuti iri Stage kana yekuvandudza vhezheni uye haina kugadzikana, ikozvino inogona kutorwa kubva izvi madokero kumwe kubatana. Iyo purojekiti inopawo ruzivo kurodha pasi izvi uye neramangwana zvigadziriso nekuwedzera iyo yepamutemo repositi yeLinux pano, asi inogona zvakare kuiswa pane macOS uye Android.
Panguva ino mukusimudzira, isu tave kutosvika panguva iyo Vanosunungura Vanokwikwidza vachatanga kusvika, asi zvingangoita vhezheni inotevera ichave WINE 6.17 uye kuti ichaburitswa pa inotevera Gunyana 10. Kana zvasimbiswa, isu tichava neimwe Stage vhezheni iyo inounza mazana ezvidiki tweaks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.16 inovandudza kuenderana nemusoro weDPI madingindira uye inounza inopfuura mazana mana shanduko
Muurayi Bean: mapenzi, asi muropa wechitatu munhu shooter mutambo
Kakawanda kusagadzikana kwakaonekwa muRealtek SDK